FALANQEYN:Maxaad kala socotaa caqabadaha ka hor taagan Madaxweyne Gaas in mar kale hogaanka u qabto Puntland? – Puntlandtimes
FALANQEYN:Maxaad kala socotaa caqabadaha ka hor taagan Madaxweyne Gaas in mar kale hogaanka u qabto Puntland?
GAROWE(P-TIMES)- Inkastoo weli si rasmi ah aysan u soo shaac bixin musharaxnimada madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas isla markaasna uusan ku dhawaaqin in uu rajo ka leeyahay mar kale qabashada hogaanka Puntland ayaa waxaa isa soo taraya hadal haynta ku aadan arimahaasi.
Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa haatan ah madaxweynaha Puntland, waxaana la doortay 8-dii Bishii January ee sanadkii 2014 kadib doorasho loolan adag ah oo u dhaxaysay musharaxiin tira ahaan gaadhayey xiligaasi 23 musharax.
Walowse kalsoonidii laga qabay Gaas ay sii daciifaysay marba marka kasii dambaysa isla mar ahaan taana deegaanada Puntland ay hadheeyeen xaalado qalafsan, mushahar la’aana ay soo wajahday shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabsida, Gaas waa mid hogaanka u hayey Puntland Shan sano soo xidhiidh ah.
Dadka siyaasada indha indheeya iyo bulshada qaarkood ayaa ka midaysan in madaxweyne Gaas uu waxyaabo badan ka qabtay Puntland hasa ahaatee hawlihii loo igmaday badankood uu ku fashilmay.
Arimaha dibu xoreynta gobolka Sool ayaa qayb ka ah kalsoonida darada ugu badan ee soo wajahday maamulkiisa, waxaana deegaanka Tukaraq weli gacanta ku haya ciidamada Somaliland oo qabsaday 8-dii January ee sanadkani 2018, halka qorshayaasha Gaas ee lagu doortay ay kamid ahaayeen dib u soo celinta gobolka Sool oo ahaa balanqaadyo uu kusoo koray hanaanka iyo saaxada siyaasada Puntland waxa ay noqdeen kuwo lagu hungoobay, waana arinta mugdiga badan galisay in mar kale uu rajo ka qabo hogaanka Puntland.
Xeeladaha iyo siyaasada uu isticmaalay madaxweyne Gaas ayaa kuwo ku cusub Puntland mana jirin madaxweyne isaga ka horeeyey oo saaxiibadiisa ugu dhow qarash badan ku bixiyey si ay xildhibaano uga soo helaan Beelaha ay kasoo jeedaan.
Afhayeenka madaxtooyada Puntland C/laahi Maxamed Quraan Jecel, Abwaan C/rashiid Yuusuf Jibriil agaasimihii madaxtooyada Puntland sidoo kale ahaa gacan yarihiisii khaaska ahaa ayaa kamid ah shakshiyaadkaasi iyo qaar kale oo badan.
Dadaalada uu Gaas u galay soo noqoshadiisa waa kuwo badan hase ahaatee hadana waxaa jira caqabado badan oo ka hor taagan soo noqoshadiisa.
Caqabadaha hor taagan madaxweyne Gaas soo noqoshadiisa ayaa waxaa kamid ah:-
1- Xildhibaanada Beesha Dhulbahante oo aanan gacanta ugu wada jirin.
2- Isimadda Beesha Dhulbahante oo aanan raali ka ahayn soo noqoshadiisa iyo balan ka bax uu ku sameeyey.
3- Nacayb badan oo shacabka u galay madaxweyne Gaas.
4- Musharaxiinta haatan loolamaya oo leh hal cadow iyo hal mowqif kaas oo ah madaxweyne Gaas.
5- Nidaamka qabiilka ah ee weli ay ku dhisan tahay Puntland oo aysan sanadkan iska lahayn Beesha Cumar Maxamuud ee uu kasoo jeedo C/weli Gaas.
6- Kala qaybsanaan ka jirta haatan Puntland iyo awooda maamul oo ay kuwada loolamayaan madaxweyne Gaas iyo ku xigeenkiisa Eng. Camay.
7- Kalsooni buuxda oo uusan haatan Gaas kawada haysan xildhibaanada cusub oo weli qabyo ah.
8- Fara gelinta dowladda federaalka Somalia oo qayb ka ah in daaqada laga saaro Mr. Gaas.
9- Xiisada haatan ka dhex aloosan madaxweyne Gaas iyo Camay oo u horseedi karta ololihiisa doorasho oo mugdi gala.
10- Shacabka Puntland oo sanadka 2019 raali ka ahayn doonayna shakhsi Qurba joog ah.
Marka laga yimaado caqabadahaasi oo dhan ayaa waxaa xusid mudan in madaxweyne Gaas uu yahay madaxweynihii ugu waxqabadka badnaa Puntland, iyadoo oo ay sidaasi tahay hadana waxaan meesha ka maqnayn in saluug badan laga muujinayo maamulkiisa.
Hadaba waxaanu eegnaaba waa 8-da January ee sanadka 2019 doorashada madaxtinimada Puntland iyo kaalinta uu Gaas kasoo galo.